DAAWO: Musharaxiinta M/weyne-nimada PL oo go’aan deg deg ah soo saaray. – Puntlandtimes
DAAWO: Musharaxiinta M/weyne-nimada PL oo go’aan deg deg ah soo saaray.
December 4, 2018 W LAASCAANO
Annaga oo ah golaha musharrixiinta dawladda Puntland 2019 oo magacyadoodu hoos ku qoran yihiin:
1. Dr. Aadan Maxamad Ciise (Gaadaale)
2. Eng. Cabdirizaaq Cabdullahi Jaamac (Jannagale)
3. General Khaliif Ciise Mudan
4. Eng. Maxamad Cabdullahi Xuseen (Shortaaye)
5. Cali Xaaji warsame
6. Maxamad Siciid (Morgan)
7. C/samad Maxamad (Gallan)
8. General Axmad Jaamac (Shaale)
9. Mudane Mohamud Cabdi Maxamad
10. General Siciid Maxamad Xirsi (Siciid dheere)
11. Xuseen Axmad Xasan Fiqi
12. Saciid Cali
13. Dr. Maxamad Salaad (Qoryooley)
14. Dr. Saadiq Eenow
15. Xaaji Maxamad Yaasiin
16. C/weli C/maan Geyre
1. Waa markii ugu horreysey oo taariikhda Puntland madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ay soo kala saaraan labo liis oo iska soo horjeeda sababna ay u tahay in madaxweynuhu taladii dalka keligii marooqsaday.
2. Waa markii ugu horreysey oo reer Puntland arkaan madaxweyne soo magacaabay guddi uusan kala tashan Guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku xigeenka taasoo khilaafsan dastuurka Puntland.
3. Wuxuu magacaabay guddi aan dhex-dhexaad loo arag oo isugu jira:
1. Maamulkiisa khaaska ah sida: guddoomiye ku xigeen gobol, agaasime iyo guud.
2. Qaraabo iyo xidid
3. La taliyayaashiisa gaarka ah
4. Dad ay xoolo wadaag yihiin “Business partners”
5. Kuwo si shakhsi ahaan ugu adeega
4. Waa guddi uusan ka tala gelin murashaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo oo foodda ina ku soo haya.
• Madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland, Cabdi-Xakiim Xaaji Cabdullahi Cumar (Camey)
• Guddoomiyaha baarlamaanku Axmad Cali Xaashi
• Musharrixiinta u tartamaaya xilka madaxweyne-nimo ee dawladda Puntland
• Waa xubno dhex-dhexaad ah oo buuxiyey shuruudihii ay musharrixiintu ku soo saareen war saxaafadeedkii soo baxay Dec. 1, 2019
1. Waa in shuruudaha gudiga iyo awoodahooda la isku waafaqo oo Musharaxiinta, Issimada, Dowladda iyo Bulshada rayidka ahi isku raacaan.
2. In laga wada tashado magacaabista guddiga Xalinta Khilaafaadka iyo kala Saaridda Xildhibaanada, si looga hortago is qabqabsi iyo ku tagrifal masiirka umadda.
3. In xubnaha guddigu noqdaan kuwo isu dheelitiran Kana kooban gobolada Puntland.
4. In guddiga aysan ka mid noqon karin shaqalaha dowladda, la taliyayaasha iyo kuwa ka shaqeeya xaafiisyada madaxda sare ee dowladda si loo ilaaliyo madax banaanidda guddiga.
5. In xubnaha guddiga aysan ka mid noqon karin qof ku cad ama u ololeeya musharax gaar ah.